Author Topic: Su'aal: Maqaarka sare ee xaniinyaha ayaa i bukada? (Read 3690 times)
« on: June 28, 2015, 05:36:09 PM »
Asc: Somali docs Ramadaan kariim, waxan rabaa in aad iiga jawaabtan Su'aalahan insha'allah.
1. Maqaarka sare ee xaniinyaha ayaa i bukadda gaar ahaan xiliga kuleelaha markaa aan gashado nikista nadaafada aad ayn ugu dadaalaa wuuna igu soo nonoqdaa maxaa xal ah? ?
Re: Su'aal: Maqaarka sare ee xaniinyaha ayaa i bukada?
« Reply #1 on: July 03, 2015, 11:58:42 AM »
Bukashada waa noocee? Ma nabro ayaa ka soo baxa? Ma dildillaac ayaa ku aragtaa? Ma midabka ayaa is badala? Ma qolfoof ayuu maqaarka yeeshaa? Ma calaamado kale oo aad dareemayso miyaa jira sida kaadida oo ku gubto, ibta oo dheecaan ka yimaado, qanjirrada saracda oo bararan ama cillado kale sida dhabar xanuun, qandho qarqaryo leh?
Fadlan warbixin dheeraad ah soo raaci su'aashaada...
« Reply #2 on: July 04, 2015, 11:57:27 AM »
Waxa i cun-cuna maqaarka kore ka dibna xoqitaanka ayaa sababo in ay murxaan waxan isticmaalay Bioscap laakin wuu so nonoqdaa maqaarka wuu adkaadaa??
« Reply #3 on: July 08, 2015, 02:26:12 PM »
Haddii sidaa ay tahay waa cillad maqaar ee fadlan takhtar maqaar u tag si loo ogaado waxa uu yahay?
Xanuuno maqaar oo kala duwan ayaa uk dhaco qooraha iyo saracda intaba, waa in la arkaa si lagu kala saaro.
Views: 13568 January 20, 2018, 03:01:49 PM
Views: 22857 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 6945 April 21, 2011, 08:48:49 AM